इन्टर मिलान युरोपा लिगको फाइनलमा, लुकाकु र मार्टिनेज चम्किए « गोर्खाली खबर डटकम
इन्टर मिलान युरोपा लिगको फाइनलमा, लुकाकु र मार्टिनेज चम्किए
एजेन्सी, २ भदाै । इटालियन क्लब इन्टर मिलान युइएफए युरोपा लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । सोमबार राति भएको खेलमा युक्रेनी क्लब साख्तर डोनेक्समाथि ५-० को सानदार जित निकाल्दै इन्टर मिलान फाइनलमा प्रवेश गरेकाे हाे ।
इन्टर मिलानलाई शानदार जित दिलाउनकाे लागि फरवार्डद्धय लोउटारो मार्टिनेज र रोमेलु लुकाकु चम्किए । मार्टिनेज र लुकाकु समान दुई दुई गरे भने एक गोल ड्यानियल डि एम्ब्रुसियोको नाममा रह्यो ।
पहिलो हाफमा १-० को अग्रता लिएको इन्टरले दोस्रो हाफमा चार गोल थप्न सफल भएको थियो । खेलको १९औं मिनेटमा अर्जेन्टिनी फरवार्ड लोउटारो मार्टिनेजले गोल गर्दै इन्टरलाई शुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए । निकोलो बरेल्लाको क्रसमा मार्टिनेजले हेडरमार्फत गोल गरेका थिए ।
६४ औं मिनेटमा ड्यानिलो डि एम्ब्रुसियोले गोल गर्दै इन्टर मिलानको अग्रता दोब्बर पारे । मार्सेलो ब्रोजोभिकको कर्नरलाई एम्ब्रुसियोले गोलमा परिणत गरेका थिए ।
७४औं मिनेटमा रोमेलु लुकाकुको पासमा मार्टिनेजले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै इन्टरलाई ३-० ले अघि बढाए । त्यसपछिको दुई गोल लुकाकुको नाममा रह्यो । उनले ६ मिनेटको अन्तरमा दुई गोल गर्दै इन्टरलाई फराकिलो जित दिलाए ।
यि घरेलु उपाय अपनाउनुहोस कपाल झर्ने र टुक्रिने समस्याबाट ढुक्कहुनुहोस
१०० बर्षअघि कस्तो थियो कोरिया ? त्यतिबेलाको कोरियाको जनजिवन कस्तो थियो ? हेरौं यि फोटोमा
१४ वर्षिय छोराको कोठामा पस्दा आमाले देखेको यस्तो डरलाग्दो दृष्यले गयो सातो , के रहेछ त्यस्तो होसै उडाउने दृष्य